Banyere Anyị - Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd.
OMLỌ> GBASARA ANYỊ
Ahịa-mbụ, Ime ihe n'eziokwu, ịdị uchu na ọhụrụ, Ndị mmadụ na-abara, onsrụ Ọrụ Dịịrị na mụ ọrụ
Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ nke na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ ọkachamara na-enyocha nyocha na mmepe, imewe, mmepụta, na ahịa. Ọ dị na ụkwụ nke Runyang Yangtze River Highway Bridge, okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, na ụgbọ mmiri na-agagharị, usoro ụzọ ọgbara ọhụrụ nke ijikọ osimiri na oke osimiri na-eweta uru dịkarịsịrị ala.
Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo ma melite usoro sayensị na nkà na ụzụ na usoro mmepe, usoro mmepụta, usoro njikwa mma, usoro ọrụ ahịa na usoro njikwa ozi, na-eto ngwa ngwa n'ime mkpuchi ahịa ụlọ kachasị elu, ụlọ ọrụ ntinye aka kachasị ukwuu nke Asia. Ndị ọrụ R & D nke ụlọ ọrụ ahụ edozila ọtụtụ nsogbu ụwa, gụnyere mwepụ na-enweghị mbibi nke akara akara, iwepụ nke na-enweghị mbibi nke psoriasis, mmiri mwepụ na-agba mmiri ma na-etegharị, ihe na-agba agba na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, otu igwe ọtụtụ akara akara , wdg. Mbubata ụgbọ mwepụ roba mwepụ ụgbọ nwere ike wepụ saịtị na 5 nkeji na egweri mmiri vepo na sundries n'ụzọ zuru oke. Njikwa ERP nke ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwe usoro isi ọdịnala ọdịnala, mmụba ihe onwunwe, ọnya ngwaahịa, yana ozi na-abanye n'ime kọmpụta arụmọrụ dị elu na ntanetị.
Companylọ ọrụ ahụ jiri nlezianya na-eme atụmatụ usoro "Otu Belt na Otu ”zọ", a na-ebupụ ngwaahịa ya na Egypt, Spain, Kazakhstan, South Korea, Kenya, Malaysia, USA, Bangladesh, South Africa, Saudi Arabia, Turkey, Singapore, Iraq, India, Germany, na obodo na mpaghara ndi ozo. Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo mmekọrịta mmekọrịta dị ogologo oge na nke siri ike na US Graco Inc. iji nọgide na-etinye nri na-edozi ahụ kachasị elu site na ụwa iji hụ na igwe ya na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na-ejigide ebe dị elu nke sayensị na teknụzụ, ma na-achọpụta nke ọma mbubata mbubata .
Anyanwụ jupụtara na njem ahụ, ikuku na igwe ojii na-akpali akpali. Companylọ ọrụ ahụ ji obi ha niile na-anabata ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie ka ha sonye aka na ịmepụta echi ka mma maka okporo ụzọ n'okporo ụzọ gburugburu ụwa.